Mmụọ Ozi Gebriel Ezite Ozi Ndị Si n’Aka Chineke | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
MMỤỌ OZI GEBRIEL EBUO AMỤMA NA A GA-AMỤ JỌN ONYE NA-EME BAPTIZIM
GEBRIEL AGWA MERI NA Ọ GA-AMỤ JIZỌS
Anyị nwere ike ikwu na ihe niile e dere na Baịbụl bụ ozi si n’aka Chineke. Ọ bụ Nna anyị nke eluigwe nyere anyị Baịbụl ka ọ na-eduzi anyị. Ka anyị lee ozi abụọ pụrụ iche e ziri ihe karịrị puku afọ abụọ gara aga. Ọ bụ mmụọ ozi aha ya bụ Gebriel, “onye na-eguzo n’ihu Chineke,” ziri ozi ndị ahụ. (Luk 1:19) Olee otú ihe dịịrị ndị ọ gara zie ozi ndị ahụ dị mkpa?
Ọ bụ n’ihe dị ka n’afọ nke 3 Tupu Oge Ndị Kraịst ka a bịara zie ozi ndị a. Ebee ka Gebriel gara zie ozi nke mbụ? Ọ bụ n’ebe ugwu Judia, nke na-adịchaghị anya na Jeruselem. Ebe ahụ ka otu onye nchụàjà Jehova aha ya bụ Zekaraya bi. Zekaraya na nwunye ya Elizabet emeela agadi, ha amụtabeghịkwa nwa. Mgbe a bịara izi ozi a, ọ bụ Zekaraya nọ ọrụ ịchụ àjà n’ụlọ nsọ. Mgbe Zekaraya nọ n’ụlọ nsọ ahụ, Gebriel pụtara na mberede n’akụkụ ebe ịchụàjà ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ.
Egwu bịara Zekaraya. Ma mmụọ ozi ahụ mere ka obi ruo ya ala. Ọ gwara ya, sị: “Zekaraya, atụla egwu n’ihi na a nụwo arịrịọ ị na-arịọsi ike, nwunye gị bụ́ Elizabet ga-amụkwara gị nwa nwoke, ị ga-akpọkwa aha ya Jọn.” Gebriel kwukwara na Jọn “ga-abụ onye ukwu n’ihu Jehova” nakwa na ‘ọ ga-akwadebere Jehova otu ndị.’—Luk 1:13-17.
Zekaraya chere na ihe a agaghị ekwe omume. Maka gịnị? Maka na ya na Elizabet emeela agadi. N’ihi ihe ahụ o chere, Gebriel gwara ya sị: “Ị ga-ada ogbi, ị gaghịkwa enwe ike ikwu okwu ruo ụbọchị ihe ndị a ga-eme, n’ihi na i kweghị ihe m kwuru.”—Luk 1:20.
Ka ihe ndị a na-eme, ndị nọ n’èzí nọ na-eche ihe mere Zekaraya ji nọọ ogologo oge n’ime ụlọ nsọ ahụ. Mgbe Zekaraya mechara pụta, ọ naghịzi ekwu okwu. Ihe ọ na-emelizi bụ iji aka na-agwa ndị mmadụ okwu. Ihe a mere ka ha matazie na o nwere ihe dị ebube ọ hụrụ mgbe ọ nọ n’ime ụlọ nsọ.
Zekaraya lawara mgbe ọ rụchara ọrụ ya n’ụlọ nsọ ahụ. Oge na-adịghị anya ihe a mechara, Elizabet dịrị ime. Ka Elizabet nọ na-eche mgbe ọ ga-amụ nwa, ọ nọrọ ọnwa ise n’ụlọ ka ndị èzí ghara ịhụ ya.
Gebriel bịara ọzọ. Onye ka ọ bịara ịhụ? Ọ bụ nwa agbọghọ na-alụbeghị di aha ya bụ Meri, onye bi n’ebe ugwu Jeruselem, n’obodo Nazaret nke dị na Galili. Gịnị ka mmụọ ozi ahụ gwara Meri? Ọ sịrị ya: “Lee! ị ga-atụrụ ime, mụọ nwa nwoke, ị ga-agụkwa ya Jizọs.” O kwukwara, sị: “Onye a ga-abụ onye ukwu, a ga-akpọkwa ya Ọkpara nke Onye Kasị Elu, . . . ọ ga-achịkwa ụlọ Jekọb dị ka eze ruo mgbe ebighị ebi, alaeze ya agaghịkwa enwe ọgwụgwụ.”—Luk 1:30-33.
O doro anya na obi dị Gebriel ezigbo ụtọ maka ihe ùgwù a e nyere ya izi ozi abụọ a. Ka anyị na-agụkwu gbasara Jọn na Jizọs, anyị ga-amata ihe mere ozi abụọ ahụ si n’eluigwe ji dị ezigbo mkpa.
Ònye bịara zie ozi abụọ dị mkpa si n’eluigwe?
Olee ndị a bịara zie ozi abụọ ahụ?
Olee ihe i chere mere ozi ndị ahụ si n’eluigwe ji siere ndị e ziri ya ike ikweta?
Ozi Abụọ Sí n’Aka Chineke
mailto:?body=Ozi Abụọ Sí n’Aka Chineke%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102014604%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ozi Abụọ Sí n’Aka Chineke